Tottenham Iyo Arsenal Oo Isha Ku Heysa Inay U Dhaqaaqdo 24 Jirka Reer Mexico Ee Weerarka Ka Ciyaara
HomeSuuqa kala iibsigaTottenham iyo Arsenal oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo 24 jirka reer Mexico ee weerarka ka ciyaara
Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba isha ku hayaan weeraryahanka Cruz Azul Orbelin Pineda.
24 jirkaan, oo horay loogu xamanayay inuu u wareegayo Man City.
Pineda wuxuu ku guuleystey inuu dib u helo shabaqa siddeed jeer wuxuuna caawiyey 7 caawin 68 kulan oo uu u ciyaaray Cruz Azul, tan iyo markii uu yimid La Maquina oo ka yimid Guadalajara sanadkii 2019.
Sida laga soo xigtay 90min, indha indheeyayaal ka socda Tottenham iyo Arsenal ayaa si dhow isha ugu haya qaab ciyaareedka weeraryahankan iyagoo ka fiirsanaya inay dalabyo ka gudbiyaan markii oo furmo suuqa kala iibsiga bisha janaayo.
Warbixinta, si kastaba ha noqotee, waxay soo jeedineysaa in labada kooxood ee reer London ay wajihi karaan tartan adag oo ka yimaada sida Wolverhampton Wanderers, Porto, Ajax iyo Everton haddii ay doonayaan inay u dhaqaaqaan.
Heshiiska Pineda uu haatan kula joogo Estadio Azteca wuxuu dhacayaa bisha Diseembar 2021.
Dhanka kale, Jeremy Doku wuxuu ku biiri lahaa Liverpool, Arsenal ama Chelsea labo sano ka hor, sida laga soo xigtay ciyaartoyga aabihiis.
Weeraryahanka reer Belguim ayaa noqday mid ka mid ah rajooyinka ugu waa weyn ee wadankiisa ka dib markii uu u ciyaaray kooxda Anderlecht isagoo 16 jir ah. Waxa uu shabaqa soo taabtay afar jeer 24 kulan oo uu u saftay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Xagaaygii hore waxaa jiray warar sheegaayay in Liverpool ay ku tilmaamtay bartilmaameed sarre oo suuqa kala iibsiga ah iyadoo Jurgen Klopp lagu soo waramayo inuu u arkay inuu yahay beddelka mustaqbalka fog ee Sadio Mane.
Si kastaba ha noqotee, Doku wuxuu ugu dambeyntii u wareegay Ligue 1Rennes. Waxa uu saxiixay heshiis shan sano ah ka dib markii naadiyada ay ku heshiiyeen heshiis ku kacaya € 26m.